Home » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Trano fandraisam-bahiny any Trinidad sy Tobago no mahazo tombony amin'ny fanampiana avy amin'ny governemanta
The Trinidad sy Tobago manome vola 50 tapitrisa dolara ho an'ny hotely ao Tobago ny governemanta hanampiana amin'ny fanavaozana sy fanavaozana ny fananany tsirairay avy ho fiomanana amin'ny fanokafana ny hotely misy azy ireo Findran'ny valizy COVID-19 coronavirus.
Ity fanambarana ity dia natao tao anatin'ny fanambarana iray feno momba ny fiatraikany ara-toekarena sy ny valiny ara-bola amin'ny COVID-19 Pandemie nataon'ny Minisitry ny Vola, Honorable Colm Imbert, tao amin'ny Parlemanta androany.
Ny minisitry ny fizahantany, Honorable Randall Mitchell, dia teo amin'ireo minisitra hafa nihaona tamin'ny tompona hotely sy trano fandraisam-bahiny tao amin'ny nosy rahavavy Tobago tamin'ny volana martsa mba hifanaraka amin'ny fanampiana omena.
Nilaza ny minisitra Mitchell fa ny sehatry ny fizahan-tany dia anisan'ireo voan'ny virus ratsy. Nilaza izy fa ny fanampiana omen'ny governemanta dia hiantoka ny fahavononan'ny hotely ho an'ireo mpitsidika andrasana izay hiverina amin'ny valanaretina COVID-19 coronavirus.
Ny praiminisitra Dr. Keith Rowley dia nilaza fa ny fahombiazan'ny firenena dia vita taorian'ny fampiharana fampiharana fepetra ara-potoana fanampiny ao anatin'izany ny fanidiana ny sisintanin'ny firenena sy ny sekolim-pirenena. Ho fanampin'izay, ny fanarahana ny protokolon'ny fahadiovana an'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (OMS) izay misy ny fanalavirana ny fiaraha-monina dia entanina hatrany ary tokony hotohizana ireo fepetra ireo Nandritra izay tapa-bolana lasa izay dia tranga roa fotsiny no hita fa misy olona betsaka kokoa navotsotra tao amin'ny hopitaly.
Ny Minisiteran'ny Fizahan-tany any Trinité sy Tobago dia mpanentana manampy amin'ny fanaovana an'i Trinidad sy Tobago ho toerana fizahan-tany voalohany. Ny politika sy ny fidirana an-tsehatra stratejika no fitaovana ilaina amin'izany. Fitaovana hafa, na dia tsy dia miharihary aza dia zava-dehibe, toy ny fanaovana fikarohana, fanaraha-maso sy fanombanana ny fironana, ary fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny indostria. Ny minisitera koa dia manampy amin'ny fananganana fahatsiarovan-tena amin'ny indostrian'ny fizahan-tany amin'ny alàlan'ny fampiharana ny minisiteran'ny fizahantany fizahantany sy ny fampandrosoana ny vokatra.
Indostrian'ny seranam-piaramanidina matanjaka manakiana ny drafitra fanarenana aorian'ny COVID-19 any Canada